Ungatshala utamatisi ehlane ngenxa yamandla elanga | Ukuvuselelwa Okuhlaza
Ungatshala utamatisi ehlane ngenxa yamandla elanga
IsiJalimane Portillo | | Ezolimo zemvelo, Amandla avuselelekayo
Amandla avuselelekayo akhombisile ukuthi alusizo kakhulu futhi enza izinto eziningi uma kuziwa ekwenzeni imibono emisha. Ubuchwepheshe obukhulu bezobuchwepheshe busetshenziswa namuhla ezimakethe ngenxa yamandla avuselelekayo. Kusukela kumabhizinisi amancane anele ngogesi kuya ezindleleni ezintsha zokusondela ebhizinisini, amandla avuselelekayo angavela.
Ubani owayengasho ukuthi ungakwazi ukhule utamatisi maphakathi nogwadule, ngaphandle kokungcolisa futhi ungakhiphi amagesi abamba ukushisa emkhathini. Yebo, lokhu sekuvele kuliqiniso okwenziwa yipulazi lase-Australia. Ubuchwepheshe bokukwenza buthuthukiswa yinkampani yaseDenmark I-Aalborg CSP.
Le nkampani ikwazile ukufaka isistimu yamandla elanga egxilile ekwaziyo ukuhlinzeka amandla nokukhipha uketshezi emanzini amasha adingekayo ukuze ikwazi ukukhiqiza cishe ama-17 million kg wamatamatisi wemvelo ngonyaka. Lokhu kulingana no-15% wayo yonke imakethe yetamatisi yase-Australia.
Le nkampani eyaphayona yaqala ukusebenza indawo esepulazini laseSundrop (ePort Augusta) ngokugcwele ngo-Okthoba 6 wale nyanga. Isakhiwo lapho kutholakala khona lesi sikhungo kwezolimo okusimeme emhlabeni owomile futhi sinakho enamamitha-skwele angama-20.000 wezindlu zokugcina izithombo. Ubuhle balezi zikhungo ukuthi ekusebenzeni kwazo akuxhomekile kumafutha wezinto ezimbiwa phansi nasezinsizakalweni zamanzi ahlanzekile, kepha kunalokho zisebenzisa amandla avuselelekayo ukukwazi ukususa amanzi emanzini adingekayo ekuniseleni nokunikeza amandla adingekayo ekulimeni kwawo.
Ukuze kuhlangatshezwane nalezi zidingo zamandla namanzi, inkampani yaseDenmark isungule uhlelo lwe-CSP olukwazi ukunikeza amandla adingekayo ukushisa i-greenhouse futhi ikwazi ukunisela utamatisi. Amandla akhiqizwa ama-heliostats angama-23.000 afakwe phansi ogwadule, aqoqa imisebe yelanga bese eyifaka phezulu esiqongweni sombhoshongo welanga ophakeme u-127m.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » I-Ecology » Ezolimo zemvelo » Ungatshala utamatisi ehlane ngenxa yamandla elanga
Abenzi bokuvuselelwa banenkinga yokuthola imali eSpain
Kutholakale i-uranium enemisebe ethe xaxa enyakatho nentshonalanga yeMedithera